Rose of Sharon: ချစ်သောVenice
Posted by rose of sharon at 6:52 PM
rose of sharon October 4, 2013 at 1:51 PM
ဓါတ်ပုံလေးများနဲ့ အတူလိုက်လည်ချင်ပါသည် ဓါတ်ပုံလဲတင်ပေးပါနော်
rose of sharon October 4, 2013 at 1:52 PM
San Htun October 3, 2013 at 8:53 PM
Venice ကို ပိုမမေ့အောင် လုပ်ပေးသလိုက်ပေါ့...း) အစ်မရေ...ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပါနော်...စာတွေပဲဖတ်ပြီး မျက်စိထဲပုံဖော်နေရတာ မမြင်ဘူး...
Anonymous October 3, 2013 at 9:00 PM
Oh Credit card problem is not only happen here in South East Asia but also happened in Europe. Thanks for your sharing this is good point to deal with clients if I face with this kind of inconvenient cases.
rose of sharon October 4, 2013 at 1:53 PM
ညီလင်းသစ် October 3, 2013 at 10:27 PM
ဗင်းနစ်က gondola လှေထိုးသားတွေက အခုနောက်ပိုင်း သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ သီချင်းမဆိုတော့တာ များတယ် မရိုစ့်ရဲ့...၊ ဧည့်သည်က တောင်းဆိုမှ ဆိုပေးတယ်၊ အဲဒီအခါ ဧည့်သည်ဖက်က သီချင်းအတွက် တစ်ပ်စ် ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလည်း ဝင်သွားစေတာပေ့ါလေ...၊
Rialto တံတားကြီးပေါ် လျှောက်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား..? ဓါတ်ပုံတွေလည်း တင်ပါဦး..။း)
rose of sharon October 4, 2013 at 1:54 PM
အော်...အဲလိုလား... မသိပါဘူး... စကားတွေများနေလို့ မဆိုဖြစ်လိုက်တာလားလို့.. တံတားတွေ့သမျှအကုန်တက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်... ဓာတ်ပုံလဲရွေးပြီးရင်တင်ပါ့မယ်
လသာည October 4, 2013 at 12:04 AM
Venice ချစ်စနိုးကျီစယ်ပုံကလည်း ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်လိုက်ရတာကွာ၊ အဆင်ပြေသွားလို့ တော်သေးနော် :)
rose of sharon October 4, 2013 at 1:55 PM
An Asian Tour Operator October 4, 2013 at 9:17 AM
ပျော်စရာကြီးပါလားဗျ။ ဒရက်ဒစ်ကတ် ကဘာမှမဖြစ်ပဲ နက်ဝပ်က ဖြစ်နေတာ ကလဲ အီတလျံ စတိုင်ပဲ ဖြစ်မယ် :P
rose of sharon October 4, 2013 at 1:56 PM
ဟုတ်မယ်..နောက်တခေါက်တော့ အီတာလျံစကားတတ်တဲ့ သောမတ်စ်တို့မိသားစုနဲ့ အတူသွားမှဖြစ်မယ်
အပြုံးပန်း October 4, 2013 at 11:07 AM
မိသားစု၊ ခရီးသွား၊ ရသတွေကို စာထဲမှာတင်မဟုတ်၊ အပြင်မှာပါ ခံစားသိမြင်လိုက်ရပါတယ်။
Thain Garra October 4, 2013 at 11:47 AM
သဘောကျမိပါသည် ။ စာအုပ်တွေ ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာ မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ Venice ကို ... ကိုယ့် အမျိုး တစ်ယောက် အလည်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဖတ်ရသလို ခံစားမိပါသည် ... ။ ပို့စ် ကို ဖတ်ရင်း နဲ့ သွားလည်ချင်စိတ် လည်း ဖြစ်မိပါသည် .... ။ တစ်နေ့နေ့ ပေါ့ ခင်ဗျာ ... :)
rose of sharon October 4, 2013 at 1:57 PM
မရို့စ်ရေးထားတာလေးကို အားကျစိတ်နဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ ဖတ်သွားတယ်။
တကယ်ဆို ကျွန်တော်ရောက်ဖူးချင်တဲ့မြို့ထဲမှာ အဲ့ဒီမြို့လည်း ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ရရင် တီဗီရှေ့က မခွာတော့တဲ့အထိပဲရယ်...
သက်ဝေ October 4, 2013 at 3:37 PM
ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပါအုံး ညီမ... အတူတူ လိုက်လည် လို့ ရတာပေါ့...း-)
rose of sharon October 4, 2013 at 6:19 PM
Kai October 4, 2013 at 9:55 PM
သွားချင်လိုက်တာဟာ လှေမဲမဲလေးတွေလဲ စီးချင်လိုက်တာ....
rose of sharon October 5, 2013 at 8:35 AM
rose of sharon October 5, 2013 at 8:36 AM
Kay Thwel October 5, 2013 at 3:07 PM
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် October 7, 2013 at 8:31 AM
ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မောင်နှမလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပျော်စရာဗင်းနစ်မြို့ ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဖတ်သွားတယ်မမနော်
အခွင့်ရှိတဲ့တနေ့မမနော်ညွှန်းတဲ့ ဗင်းနစ်ကို အရောက်သွားမယ် :)
ဟန်ကြည် October 9, 2013 at 3:14 AM
ဗင်းနစ်အကြောင်းဖတ်ရင်း မင်းသားကြီး Al Pacino ရဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ပြန်သတိရသွားမိတယ်...အီတလီပြည်ဟာ သမိုင်းထဲက တိုင်းပြည်ပါ မနှင်းဆီ...အတိတ်ရဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုတွေကို လတ်တလော ချစ်ကြည်နူးမှုတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ ချစ်စရာ တိုင်းပြည်ဖြစ်တာမို့ တစ်နေ့နေ့တော့ အရောက်သွားဖို့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်အပြီးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်မိပါတယ်....
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) October 17, 2013 at 8:18 PM
အစ်မရဲ့ သားနဲ့ သမီးက တအားချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်နော်။ နှစ်ယောက်လည်း ချောချောလေးတွေ။ ကြီးလာရင် မေမေ စိတ်တွေပူနေရတော့မှာ မြင်ယောင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီမြို့လေးက မြတ် သွားဖူးချင်နေတဲ့ နေရာလေး။ :)
မိုးသက် October 21, 2013 at 9:06 PM
ကျွန်တော် မရောက်ဖြစ်သေးတဲ့ အိပ်မက်ထဲက မြို့တစ်မြို့ပေါ့ အစ်မရယ်.။
blackroze November 24, 2013 at 1:46 AM
အိမ်မက်ထဲကမြို့လေးစီ ပစ်လည်း မိသားစုနဲ့တူတူ